Isifunda iZululand njengesiqalo sakho konke – Ubukhosi
Home/ Amasiko/Isifunda iZululand njengesiqalo sakho konke
Isifunda iZululand njengesiqalo sakho konke
Ubukhosi News September 29, 2017
0 3,938 1 minute read
Kukhona okwehlukile nokuligolide ngesifunda iZululand. Lokhu akulona ifagugu nje kuphela kepha kukhona nokungaba yisixazululo kulokho okuxake i Ningizimu Afrika – intuthuko yezindawo zasemakhaya. Nxa sibheka ifagugu elingumlando wethu cishe le ndawo ikuphethe konke. Lesi yisifundazwe sezinyandezulu, ngoba kulapho kulondolozwe amathambo eningi leZingonyama zikaZulu lapha eMakhosini.
IZigodlo ezimbili ezimqoka okunguNodwengu nayilapho amathambo oMsimude, iNgonyama uMpande. ISigodlo sesibili kusOndini okwabe kuyiNhlokodolobha kaZulu nayilapho iziwombe ezimbili ezaguqula umlando kaZulu zenzeka khona. Isiwombe sokuqala kwaba wukuphuma koMkhumbi Wempi kaZulu uyoqopha umlando eSandlwana nalapho wafika ngobuchule wavikela khona isithunzi sikaZulu kanye nesihlalo ngomhla zingama-22 kuMasingana ngowe-1879.
Kusesifundeni iZululand lapho amadelamzimba kaZulu ngezingazi zawo alwa nabahlaseli bamaNgisi ababebuthwe kuleli kanye naphesheya kwezilwandle nabagcina bebhubhise iSigodlo ngomlilo mhla zizi-4 kuNtulikazi ngowe-1879. Zombili lezi ziwombe zasho isiqalo esisha kuZulu nasemlandweni woBukhosi. Kukulesi sifundazwe lapho kuhlala khona ISILO kanye noNdunankulu kaZulu, uMtwana wakwaPhindangene. Kulesi sifunda uZulu unamakhaya (iZigodlo) afundumele; kukhona kwaKhethomthandayo, eNaleni, kwaDlamahlahla, ONdini, eNyokeni, KwaKhangela naKwaLinduzulu. Kulabo abanomqondo wokwenza ibhizinisi besebenzisa ifagugu lethu kanye nezokuvakasha, iZululand yigolide elithukusiweyo nokungathi nxa lingasetshenzwa kahle kuqhakaze kwabaningi.
Lesi yisifunda saMakhosi njengoba sinaMakhosi ezizwe ezibongo ezahlukene nokuqhakazisa iSihlalo sikaZulu. Ukuhleleka kwezizwe nendawo eZululand kanye nangendlela izinhlaka zoBukhosi ezakheke futhi ezihlonishwa, ngayo kungaba yisifundo ezweni lapho izinga lokuhlonipha izinhlaka zokubusa liphansi ngendlela edala amahloni. Isinqumo sokususa iSishayamthetho eZululand kwaba yisinqumo esathathwa ngosopolitiki belandela inqubo ethize. Akuyona imfihlo ukuthi leso sinqumo saba nomthelela emphakathini wakulesi sifunda ikakhulukazi nxa kufika emnothweni wendawo. Nokho umoya wokuzakha nokuzenzela wabantu baseZululand udinga ukutuswa futhi ube yisibonelo kweminye imiphakathi. Phezu kwengcindezi osomabhizinisi bendawo lapha bayenza kwenzeke. Lo ngumoya okumele uvunguze kuyo yonke imiphakathi ukuze izwe lethu libe ngelithuthukayo.
Njengazo zonke izindawo ezisemakhaya, isifunda iZululand sinezingqinamba kusuka kungqalasizinda yemigwaqo kanye namanzi. Zikhona futhi nezinkinga zokuxhumana kwezinhlanga njengalapha koDumbe nakwezinye izindawo. Nokho uma uzwa ngezinhlelo zemikhandlu eyakhele lesi sifunda kusuka eDumbe, eBaqulusini, Ondini, kwaNongoma nasoPhongolo likhona ithemba njengoba kusobala ukuthi abahola le mikhandlu bayaziqonda izingqinamba ababhekene nazo kanti futhi likhona neqhingasu.
Namuhla sethula iphephandaba elizolekelela umphakathi waseZululand ekukwazini ukuzithuthukisa. Leli phephandaba, UBUKHOSI lizoba yimizwa yezakhamizi lapho libika ngalokho okuyimizamo yazo yokuziphilisa nokuba yingxenye yokubuswa kwabo. Leli phephandaba lizoba yisigijimi soBukhosi, sixhumanise umphakathi, umasipala kanye noBukhosi. Lesi yisiqalo sokuqinisekisa ukuthi imiphakathi nomasipala basemakhaya nabo bayalicosha ivenge lentuthuko yezwe. Ngaleli phephandaba sisho ngokungananazi ukuthi: Nabase makhaya nabo bayizakhamizi, okumele zilalelwe futhi zithuthukiswe.
UMkhandlu nezinhlelo zokukhumbula umuga wasOndini
UBukhosi kuqala okunye kuza kamuva